डाक्टर-गायिका त्रिशला भन्छिन्ः यो समयको... :: सबिना श्रेष्ठ :: Setopati
डाक्टर-गायिका त्रिशला भन्छिन्ः यो समयको प्रतीक्षा धेरै अघिदेखि गरिरहेकी थिएँ
सबिना श्रेष्ठ काठमाडाैं, वैशाख ३१
त्रिशला गुरुङ। तस्बिरः त्रिशलाको फेसबुक
त्रिशला गुरुङ गायिका मात्रै होइनन्, डाक्टर पनि हुन्।
करिब पाँच महिनाअघिबाट उनको डाक्टरी यात्रा सुरू भएको थियो। पढाइ र संगीतबीच अस्पतालको जिम्मेवारी थपियो। नेपाल मेडिकल कलेजमा कामको दौडधूप अनुभव संगाल्दै थिइन्, कोरोना भाइरसले लकडाउन भयो। त्यसयता उनको दैनिकी फेरिएको छ।
'ड्युटी सधैं छैन। ४-५ दिन मिलाएर हुन्छ। भिड हुन्छ, संक्रमण होला भनेर सबैलाई अस्पतालले बोलाएको छैन,' उनले भनिन्।
यता अस्पतालमा पूरा समय दिन नपर्दा संगीतबारे सोच्ने, काम गर्ने फुर्सद मिलेको छ। डाक्टरको परिचय जोडिनुअघि नै त्रिशलाको जीवनमा सांगीतिक पहिचान जोडिएको थियो।
पढाइ र संगीत एकसाथ लग्दा अनेकौं अवसर गुमाउनु परेको उनीसँग अनुभव छ। कतिपटक परीक्षाकै समयमा परेको सांगीतिक यात्रा छुट्दाको छटपटी झेलिन्। लकडाउनले भने संगीतका थाती काम पूरा गर्न पाएकाले उनी दंग सुनिइन्, 'अस्पताल जाने कि, गाना पूरा गर्ने कि, भिडिओ सुट गर्ने कि, धेरै काम अधूरा थिए। कसरी सक्ने होला भइरहेका बेला ठ्याक्कै लकडाउन भयो।'
यो समयलाई उनी आनन्द र आरामको समय मान्छिन्, जसको लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेकी थिइन्। कामपछि पाउने थोरै फुर्सदले पनि खुसी छिन्, 'पहिला पनि परीक्षा तयारी गर्न दुई–तीन महिनादेखि घरमै बस्नुपर्थ्यो। काम नै उठ्ने अनि पढ्ने। घर बस्ने बानीजस्तै थियो। अहिले भने मन लागेका काम अनि गानाहरू सुन्न समय पाएकी छु। रमाइलै भइरहेको छ।'
डाक्टरी पढाइले त्रिशलाको तालिका अन्य गायिकाभन्दा फरक हुन्थ्यो। धेरै समय किताब र पुस्तकालयमा बित्थ्यो। लामो समयदेखि यही दैनिकीको उनलाई बानी परिसकेको थियो। रमाइलोका नाममा कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग खान अनि फिल्म हेर्न जाने त्रिशला आफू त्यति सामाजिक नभएको बताउँछिन्, 'घुम्ने, पार्टी गर्ने भन्ने नै नहुने। त्यसले गर्दा पनि खासै सामाजिक दुरीले असर गरेको छैन।'
त्रिशला हाल आफ्नी आमासँग चाबहिलमा बसिरहेकी छन्। सुरूसुरूमा उनलाई आफू दिनभर अस्पतालमा हुने भएकाले कोरोना ल्याएर आमालाई सार्छु कि भन्ने डर लाग्थ्यो। अहिले काम गर्दै गएपछि कोरोनाको डर कम हुन थालेको छ।
त्यही पनि घर फर्कनासाथ उनी आफ्नो कोठामा सिधै छिर्दिनन्। तल एउटा छुट्टै कोठा छ, जसमा आफ्ना सम्पूर्ण लुगा फेरेर नुहाउँछिन् र मात्रै कोठा प्रवेश गर्छिन्। बुवा भूतपूर्व ब्रिटिस आर्मी भएकाले बेलायतमा छन्। आफूझैं डाक्टर पेशा अंगालेका दाइ पनि उतै।
'दादा त जोखिम हुन्छ भनेर चार हप्तादेखि घर पनि आउनुभएको छैन रे। उतै होटलतिर बसिरहनुभएको छ,' उनले बेलायतमा डाक्टर रहेका आफ्ना दाइबारे भनिन्, 'कमसेकम म त घर आउन पाइरहेकी छु।'
त्रिशलाले लामो समय 'कभर' गीत गाइन्। लता मंगेशकरको 'लग जा गले' गाएर सामाजिक सञ्जालमा हालेयता उनका गीतको माग बढ्यो। प्रस्तावहरू पनि आए। उनले गाएको धेरैले मन पराउन थालेपछि पढाइ र गायनलाई सँगसँगै लगिन्। पछिल्लो समय भने आफ्नै एल्बममा काम गरिरहेकी छन्।
लकडाउन नहुँदो हो त त्रिशला समय निकालेर गीतको सुटिङ गर्न मुस्ताङ जाने योजनामा थिइन्। भ्रमण वर्ष-२०२० का लागि एउटा गीत बनाएकी थिइन्। विभिन्न ठाउँ गएर सुटिङ गर्ने योजना थियो। उनको एल्बमको तीन गीत 'यो मन', 'काठमाडौं सहर' र 'के होला' युट्युबमार्फत् रिलिज भइसकेको छ। आठ गीत समावेश हुने एल्बमका लागि उनी आफैंले लेखेकी छन्।
'हेर्नु न! अरू मान्छेलाई गीत लेख्दिनु भन्ने पनि खासै धेरै अप्सन छैन। त्यही बाध्यता भएर आफैं लेख्न थालियो,' उनले भनिन्, 'लेख्न बाँकी अधूरा गाना यो समयमा लेखिरहेकी छु।'
त्रिशलालाई जीवन र प्रेरणादायी गीत लेख्न मन छ। देशका बारेमा पनि लेखेकी छन्। हाल लेखिरहेका गीत प्रेमका छन्। धेरै प्रेमका गीत सुन्ने भएकाले त्यसो भएको हुनसक्ने उनी बताउँछिन्।
'अभ्यास नभएर होला। अबको केही वर्षमा लेख्दा लेख्दा बानी भएर जीवन जगतका गहिरा कुरा लेख्न सक्छु कि,' उनी आशावादी छिन्।
त्रिशला 'सफ्ट मेलोडी' गीत मन पराउँछिन्। लता मंगेशकर, आशा भोस्लेदेखि उदय–मनिला सोताङ, नारायण गोपालका गीत सुन्छिन्। भजन पनि धेरै गाइरहेकी हुन्छिन्। भजनले शान्त महशुस गराएको बताउने उनी हरेक शनिबार गौशालास्थित मानवधर्म आश्रममा भजन गाउन जान्थिन्। लकडाउनका कारण अहिले हरेक शनिबार पुग्न नसके पनि पछिल्लोपटक अप्रिल ३० मा आफ्नो जन्मदिन पारेर त्यहाँ भजन गाएको बताइन्।
'जन्म दिन कस्तो भयो?'
'बुद्ध जयन्तीका लागि कार्यक्रम भएकाले भजन पनि गाउन पाएँ। कस्तो खुसी भएँ,' उनले भनिन्, 'घरमै केक काटेँ। फ्यानहरूले पनि शुभकामना दिनुभयो। एकदम रमाइलो भयो नि।'
तर जन्मदिनमा केक काट्ने, सर्प्राइज गर्ने भन्ने कुराले त्रिशला दबाबजस्तो महशुस गर्छिन् रे। बाहिर गएर पार्टी गर्न उनलाई मन पर्दैन। बरू घरमै मनाउन मन पराउँछिन्।
भजनमा रूचि राख्ने त्रिशलाको भगवानमा पनि धेरे विश्वास छ। भजन वा संगीतको दैनिक रियाज गर्ने बानी भने छैन। पहिले व्यावसायिक रूपले गायनमा लाग्छु भन्ने सोचेकै पनि थिइनन्। गायनले बरू उनलाई पछ्याइरह्यो। भाग्यवश, त्यस्तै मान्छेको संगत पाइरहिन्।
धरानस्थित उनको घर तल त्यति बेला नेपाली तारा नभइसकेका दीपक लिम्बूले साधना केन्द्र खोलेका थिए। उनैले 'यसले त राम्रो गाउँछ' भन्दै प्रोत्साहन दिन्थे। स्कुलका शिक्षकले पनि संगीत कक्षाका लागि 'फोर्स' गर्थे।
उनी भन्छिन्, 'सायद मेरो भाग्यमै लेखेको थियो होला। त्यही भएर त संगीतसँग बारम्बार ठोक्किइरहेँ।'
पछिल्लो समय म्युजिक प्रोड्युसर रोहित शाक्यसँग उनी काम गरिरहेकी छन्। यसमा पनि आफ्नो भाग्य बलियो भएको बताउँछिन्।
'नेपालमा राम्रो म्युजिक प्रोड्युसर को होला भन्दा रोहित शाक्य दिमागमा आउँथ्यो। उहाँको काम पनि हेरिरहेकी हुन्थेँ। एकदिन ठ्याक्कै उहाँले म्यासेज गरेर गीतको काम गर्ने प्रस्ताव गर्दा छक्क परेकी थिएँ,' हाल उनैसँगको एल्बममा त्रिशला काम गरिरहेकी छन्, 'भगवानले नै संकेत दिएर सबै कुरा ठ्याक्क ठ्याक्क भइरहेको छ।'
त्यस्तै भाग्यको कुरा गर्दा उनले आफूलाई एकपटक भारतीय फिल्म निर्माण कम्पनी यशराज फिल्म्सबाट समेत प्रस्ताव आएको बताइन्। त्यो बेला परीक्षा आउन लागेकाले उनले प्रस्ताव त्याग्नु परेछ।
'अहिले सम्झँदा ला.. जस्तो त हुन्छ। तर त्यो कुरा सम्झेर आफ्नो काम असर गर्नु भएन नि,' उनी भन्छिन्।
आफूजस्तै डाक्टर भएर अन्य पेशामा सफल भएका मान्छेबारे उनको चासो रहन्छ, 'मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर पनि डाक्टर भएकाले उनको अन्तर्वार्ता हेर्न मन छ। डाक्टर भएर मलाई त कति कुरामा गाह्रो भयो। म जस्तै मान्छेबारे जान्न मन छ।'
लकडाउनको फुर्सदिलो समयमा मानिसहरू धेरै किताब र फिल्म हेरिरहेका छन्। त्रिशलालाई यिनमा खासै रूचि छैन। साथीसँग कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्न जाने उनी एक्लो समय फिल्ममा रमाउन्नन्। यही समयमा हिन्दी फिल्म 'जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा' हेर्दा भने उनी धेरै प्रेरित भइछन् र लागेछ – ओहो! कस्तो कलाजस्तो फिल्म।
उनलाई उपन्यासका किताबले पनि कहिल्यै आकर्षित गरेनन्।
'स्कुल पढ्दाताक ह्यारी पोर्टर एकदम चर्चामा आएर पढ्न खोजेकी थिएँ। पढ्न नसकेर बरू फिल्म हेर्छु भन्दै बन्द गरेँ,' उनले भनिन्, 'बरू कमिक्स पढ्थेँ।'
लकडाउनका पछिल्ला केही दिन भने त्रिशला केही तनावमा थिइन्। दाइले पढ्न राम्रो भनेर सुझाएका 'रेड्डिट एप' मै उनको तस्बिर राखेर अभद्र तरिकाले टीकाटिप्पणी भइरहेको थियो।
'एक वर्ष पुरानो फोटो थियो। तर चुप लागेर बस्यो भने पछिको समाजका लागि राम्रो होइन भनेर साइबर ब्युरोलाई कल गरेँ,' उनले भनिन्, 'इमेल गरेर फोटो पठाएँ र अपिल गरेँ। अरूलाई सचेत गराउन इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा पनि राखेँ। त्यहाँ आफ्नो पनि फोटो देखेर धेरै सजग हुनुभयो।'
उनले अगाडि भनिन्, 'हाम्रो समाज के भइरहेको छ भनेर दुई-चार दिन साह्रै डिस्टर्ब भएकी थिएँ। साइबर क्राइम त अर्कै स्तरमा गइसकेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा नराम्रो लाग्यो। फेरि मैले चुपचाप नबसेर आफूले सक्दो गरेँ भन्ने पनि भयो।'
'पब्लिक फिगर' भएकाले उनी स-साना कुरामा सचेत रहन्छिन्। स-साना कुराबाट चाँडै प्रभावित पनि हुन्छिन्। नकारात्मक कुरा आइरहे पनि सकारात्मक कुराले त्यसबाट टाढा रहन खोज्छिन्।
लकडाउन खुलेपछि त्रिशला आफ्ना सबै तनाव र अस्पतालको कामबाट बेक्र लिएर संगीतको काम पूरा गर्न चाहन्छिन्। आफ्नो गीतको सुटिङ पनि गर्ने सोच छ।
दिनहरू सामान्य हुन समय लाग्ने भएकाले निश्चित भने छैनन्, 'त्यो भएन भने पनि लिरिकल भिडिओ वा केही न केही गर्नुपर्छ। 'द सो मस्ट गो अन' भन्छन् नि।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ३१, २०७७, २०:३४:००